बाउन्स दर: कसरी तपाइँको साइटको गति अप्टिमाइज गर्ने र Semalt को साथ तपाइँको बाउन्स दर घटाउने
जुलाई २०१ 2018 देखि, Google धेरै छिटो वेबमा गम्भीरतापूर्वक काम गरिरहेको छ। यो एएमपी टेक्नोलोजीको प्रमोटनमा व्यस्त थियो। पृष्ठको सामग्री सकेसम्म सानो र साधारण बनाइएको थियो, ताकि मोबाइल फोनमा पृष्ठ धेरै छिटो लोड गर्न सकिन्छ। तर अब यो केहि पुरानो भएको छ र हाइप समाप्त भयो। एक उत्तरदायी डिजाईन मोबाइल ब्राउजरहरूमा अगाडि बढ्न प्राय: भन्दा बढि हुन्छ।
यद्यपि उत्तम र्याकिंग पाउन यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाईंको साइटको गति अप्टिमाइजेसन राम्रोसँग गर्नु पर्दछ र बाउन्स रेट बिल्कुल घटाउनुपर्नेछ।
त्यसोभए, यस लेखमा तपाइँको साइटको गतिलाई अप्टिमाइज गर्न र बाउन्स रेट घटाउने प्रभावकारी विधिहरू पत्ता लगाउनुहोस्।
तपाईंको वेबसाइटको गतिलाई अप्टिमाइज गर्न यी नि: शुल्क वर्डप्रेस प्लगइनहरू जाँच गर्नुहोस्
यी उत्तम प्लगइनहरू हुन् जसले तपाईंलाई तपाईंको वेबसाइटको गतिलाई अनुकूलित गर्न मद्दत गर्दछ।
जहाँसम्म तपाइँको वेबसाइटको गति बढाउने कुनै तरिका छैन, म यसलाई मिस गर्न सक्दिन जब यो तपाइँको WordPress को साइटलाई अनुकूलित गर्न आउँदछ। WordPress मा सब भन्दा उन्नत SEO विकल्पहरूको साथ उत्तम प्लगइनहरूमध्ये एक रान्कमाथ हो।
र यो नि: शुल्क पनि छ।
रान्कमाथ सायद एक उत्तम SEO प्लगइन हो।
Rankmath संग तपाईं सजीलै आफ्नो शीर्षक, मेटा विवरण, OG डाटा, स्किमा, redirects र अधिक अधिक अप्टिमाइज गर्न सक्नुहुन्छ। Yoast SEO बिर्सनुहोस्, र रान्कमाथको लागि जानुहोस्। यो वास्तवमै त्यहाँ एक धेरै उन्नत नि: शुल्क एसईओ उपकरणहरू मध्ये एक हो!
गुगलमा तपाईंको वर्डप्रेसको वेबसाईट उच्च पाउने एक तरिका क्यासि plugin प्लगइनको साथ तपाईंको वेग सुधार गर्नु हो। क्यासि plugin प्लगइनले तपाईंको पृष्ठको 'फोटो' लिन्छ र आगन्तुकलाई देखाउँदछ।
सामान्यतया, वर्डप्रेसले प्रत्येक आगन्तुकका लागि डाटाबेसबाट सूचना पुनः प्राप्त गर्दछ र त्यसपछि मात्र यो आगन्तुकलाई देखाउँदछ। यसले अधिक समय लिन्छ र सर्भरहरू प्रशोधन पनि। एउटा क्यासि plugin प्लगइनले धेरै समय बचत गर्न सक्दछ र सर्भरमा कम लोड गर्दछ।
त्यहाँ धेरै वर्डप्रेस क्यासिंग प्लगइनहरू छन् जुन तपाईंलाई मद्दत गर्न सक्दछ।
WP सब भन्दा छिटो क्याच
यो सँधै एक नि: शुल्क, सरल क्यासिंग प्लगइनसँग शुरू गर्न सिफारिस गरिन्छ जस्तै डब्ल्यूपी फास्ट क्यास। यस प्लगइनले तपाइँको वेबसाइटको गतिलाई उल्लेखनीय रूपमा सुधार गर्दछ वेबसाइट स्क्रुइंगको बारेमा चिन्ता नगरिकन। उन्नत विकल्पहरू मात्र प्रो संस्करणमा पहुँचयोग्य छन्।
सचेत रहनुहोस् कि तपाइँको वेबसाइट भंग गर्न सक्दछ। त्यसोभए यो जान्नु बुद्धिमानी हुन्छ कि तपाइँ कसरी वेबसाइटको फाईलहरू एफटीपी मार्फत वा वेब होस्टिंग पोर्टल मार्फत पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ।
त्यसकारण कुनै चीजलाई अनुकूलन गर्नु अघि जहिले पनि जगेडा सञ्चालन गर्न सुझाव दिइन्छ। यदि केहि गलत भयो भने, तपाईं क्यासिंग प्लगइनको फोल्डरको नाम बदल्न सक्नुहुन्छ ताकि प्लगइनले काम गर्दैन।
यदि तपाईं गम्भीर हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं यो क्यासिंग राक्षसलाई पनि जाँच गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईंले यो उपकरण प्रयोग गर्न सुरू गर्नु अघि तपाईसँग साँच्चिकै ब्याकअप हुनुपर्दछ। यो यति उन्नत छ कि तपाईं छिटो केहि 'धेरै' समायोजित गर्नुहुन्छ र वेबसाइट किक आउट हुन्छ। यसैले मात्र सिफारिश गरिन्छ यदि तपाईं साँच्चिकै गतिबाट अन्तिम ड्रपहरू प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने। त्यहाँ अंतर्निहित छवि अनुकूलक पनि छ, जसले छविहरूलाई कम गर्दछ र यसलाई वेब ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सक्दछ। वेब ढाँचा अझै .jpg भन्दा धेरै सानो छ। सानो छवि को फाईल आकार हो, छिटो पृष्ठ लोड हुनेछ।
छविहरु लोड गर्न पृष्ठ ढिलो। त्यसोभए तपाईंको छविहरूको अप्टिमाइजेसन SEO को लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर तपाईंको गतिको लागि। यो तस्विर कति ठूलो प्रदर्शित हुन्छ भनेर होइन; यो अधिकतर फाईल ढाँचाको बारेमा हो। सानो फाइल फाईल हो, र यो उत्तम हुनेछ।
यो प्रति महिना १०० तस्बिरहरूको लागि निःशुल्क हो!
यो प्राप्त गर्ने एउटा तरिका, शॉर्टकपिक्सल भनिने प्लगइन मार्फत हो। त्यहाँ धेरै प्लगइनहरू छन् जसले यो गर्दछ, तर सर्टलपिक्सल यस कामका लागि उत्तम प्लगइनहरू मध्ये एक हुन जान्छ। थप रूपमा, सर्टपिक्सल पनि CDN को रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ, ताकि तपाइँको सर्भरमा कम 'लोड' राखियो। छविहरू अर्को सर्वरबाट लोड गरियो र तपाईंको होइन।
A3 सुस्त लोड
पूर्वनिर्धारित द्वारा, पृष्ठहरू सबै छविहरू लोड गर्दछ जब एक आगन्तुक प्रवेश गर्दछ। फरक पर्दैन कि तस्विर पृष्ठको एकदम तल छ वा शीर्षमा छ। सबै तस्विरहरू लोड हुन्छन्, आगन्तुक पृष्ठमा उत्रने बित्तिकै।
तपाईं कल्पना गर्न सक्नुहुन्छ कि यसले कम्प्युटर वा ब्राउजरका लागि सबै फाइलहरू लोड गर्न 'प्रशोधन शक्ति' को केही हदसम्म लिन्छ।
यसबाट उम्कनको एक तरीका तस्विर आलस्य लोडिंग प्रयोग गर्नु हो। यसको लागि उपयोगी र नि: शुल्क प्लगइन A3 सुस्त लोड हो। तपाईंले देख्न नसक्ने तस्वीरहरू अझै लोड भएका छैनन्। एक सुस्त लोडरको साथ, छवि लोड हुँदैन जबसम्म यो पर्दामा देखा पर्दैन।
तपाईको बाउन्स रेट कम गर्न २१ सल्लाहहरू
खोजी ईन्जिनमा बाहिर उभिँदा अझ धेरै आगन्तुकहरू पाउन मद्दत गर्दछ। तर यो त्यहाँ रोकिदैन, किनभने आगन्तुकहरूले तुरुन्तै खोजी ईन्जिनहरूमा फर्कनु हुँदैन र त्यसपछि प्रतिस्पर्धीमा जानु हुँदैन। त्यसोभए तपाइँ तपाइँको खोजी परिणामहरूमा क्लिक गर्न चाहानुहुन्छ! र तपाईं कसरी यसलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ?
बाहिर उभिएर हुन सक्छ?
जब व्यक्तिहरूले पाठले भरिएको पृष्ठमा हेर्दछन्, तिनीहरूको आँखाले सम्भावित चीजहरू याद गर्दछ जुन छविहरू, इमोजीहरू, तर संख्याहरू जस्तो लाग्छ।
तपाईंको CTR बढाउनुहोस्
यदि तपाइँ खोजी परिणामहरूमा अझ बाहिर खडा गर्न चाहनुहुन्छ भने, यी स h्केतहरूले तपाईंलाई निश्चित रूपमा मद्दत गर्दछ। तपाईं यो शीर्षकको साथै मेटा वर्णनमा प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ!
यो त मात्र उपयोगी छ यदि तपाईं पहिलो पृष्ठमा हुनुहुन्छ, किनभने त्यसो भए तपाईं गुगलमा पृष्ठहरू भन्दा धेरै आगन्तुकहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ।
नम्बरहरू प्रयोग गर्नुहोस्
जब तपाईंसँग पाठको पृष्ठ भरिएको छ, तपाईंको आँखा छिटो बाहिर चीजहरूको लागि खोज्नेछ। नम्बरहरू जस्तै एक बर्षमा त्यसपछि चाँडै ध्यान दिइन्छ र अधिक ध्यान प्राप्त गर्दछ।
प्रतीक र विशेष क्यारेक्टर प्रयोग गर्नुहोस्
प्रतीकहरू र विशेष क्यारेक्टरहरू पाठको पूर्ण स्क्रीनमा अधिक चाँडै देखिन्छन्। विशेष क्यारेक्टरहरू (+ - | & @ & सामान्य पाठ भन्दा धेरै बाहिर खडा।
ठूला अक्षरहरू प्रयोग गर्नुहोस्
कहिलेकाँही यो अतिशयोक्तिपूर्ण पनि हुन्छ, तर क्यापिटल अक्षरबाट शुरू हुने शब्दहरूसहितको वाक्य सबै लोअरकेस अक्षरहरूको सामान्य वाक्यभन्दा राम्रो देखिन्छ।
कार्यको लागि स्पष्ट कल प्रयोग गर्नुहोस्
सायद स्पष्ट कल-टु-एक्शन पहिलो नजरमा तुरून्त देख्न सकिँदैन, तर जतिन्जेल कसैले सबै शीर्षकहरू देख्छन्, स्पष्ट कल-टु-एक्शन तपाईंको खोजी परिणाममा क्लिक गर्न ट्रिगर हुन सक्छ।
इमोजी र आइकनहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यसले धेरै खोजशब्दहरूको साथ काम गर्ने छैन। सम्भवतः इमोजिसलाई 'दुरुपयोग' गरिएको छ, तर यो अझै केहि खोजशब्दहरूको लागि देखाइएको छ। शीर्षकमा इमोजीहरू र आइकनहरू मेटा वर्णनको तुलनामा Google द्वारा प्राय: हटाइन्छन्। यसलाई थप्ने प्रयास गर्नुहोस्, र तपाईंको पृष्ठ गुगल द्वारा क्रल गरिएको छ त्यसैले केही दिन पर्खनुहोस् यदि यो तत्काल देखा पर्दैन।
USP का साथ आगन्तुकलाई मनाउनुहोस्
विशेष गरी जब कसैले उत्पादनको खोजीमा हुन्छन्, USP हरूले भिन्नता गर्न सक्दछन्। विशेष गरी प्रतीकहरू वा इमोजिससँग संयोजनमा, यो अधिक क्लिकहरू प्राप्त गर्न निर्णायक कारक हुन सक्छ। उदाहरणका लागि विचार गर्नुहोस्: नि: शुल्क शिपिंग। नि: शुल्क वापसी days० दिन भित्र, २ 24 घण्टा डेलिभरी, days ० दिन भित्र तपाईको दिमाग परिवर्तन गर्न, पछि भुक्तान गर्नुहोस्, सन्तुष्ट छैन, पैसा फिर्ता।
खोज परिणामहरूमा ताराहरुको लागि स्किमा प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको पृष्ठमा संरचित डाटा प्रयोग गरेर तपाईं खोजी परिणामहरूमा केही सुविधाहरू ट्रिगर गर्न सक्नुहुनेछ। एक वेबशपको रूपमा तपाईं यी संरचित डाटा (तालिका) बिना गर्न सक्नुहुन्न। त्यसोभए तपाईं देखाउन सक्नुहुनेछ कति उत्पादनहरू छन् कति तारा, तर तपाईं पनी मूल्य पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। तपाईं यसको लागि WordPress मा स्किमा प्लगइन प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
प्रो टिप: किनकि यी सबै सुझावहरू मात्र उपयोगी छन् यदि तपाईं पहिलो पृष्ठमा हुनुहुन्छ। म सिफारिश गर्दछु कि तपाईले पहिले आफ्नो कुञ्जी शीर्षक र मेटा विवरणमा अप्टिमाइज गर्नुभयो र उच्च CTR (क्लिक-थ्रु रेट) को लागी पछि मात्र अप्टिमाइज गर्नुहोस्। यो शीर्षक पृष्ठमा CTR अप्टिमाइजेसनको कारणले हुन सक्छ पृष्ठ 1 मा खोजी परिणामहरूको साथ तपाईं पर्याप्त प्रतिस्पर्धा गर्नुहुन्न।
मापदण्डहरू खातामा लिनको लागि तपाइँको बाउन्स दर कम गर्न
एकचोटि तपाईंले क्लिक प्राप्त गरेपछि, तपाईं पनि तिनीहरूलाई 'होल्ड' वा कमसेकम तिनीहरूको प्रश्नको उत्तर दिनुहोस् कि उनीहरूले अगाडि देख्नुपर्दैन। यो बाउन्स रेटको बारेमा त्यत्ति धेरै छैन जुन तपाईले Google एनालिटिक्समा देख्नुहुन्छ! कुरा यो हो कि आगन्तुक खोजी परिणाममा फर्कदैन र प्रतिस्पर्धीमा जान सक्दैन!
प्रश्नको उत्तर दिनुहोस्
यस प्रश्नको उत्तर यस्तो तरिकाले दिनुहोस् कि खोजीकर्ताले अर्को वेबसाइटमा जान नपरोस्। यो स्पष्ट देखिन्छ। प्रश्न कोशिस गर्नुहोस् ताकि अन्वेषकहरूसँग आफूले जान्न चाहेका सबै कुरा छन्।
तपाईंको वेब पृष्ठमा छविहरू र भिडियोहरू प्रक्रिया गर्नुहोस्
छविहरू र भिडियोहरू थप्नाले तपाईंको साइटमा आगन्तुक लामो समय बस्ने र खोजी परिणामहरूमा फर्कने सम्भावना कम हुने सम्भावना बढ्नेछ।
सेतो खाली ठाउँको साथ पर्याप्त परिच्छेदहरू प्रयोग गर्नुहोस् र सबै कुरा सँगै टेप नगर्नुहोस्।
धेरै लामो पाठको टुक्रा अक्सर प्रतिक्रियात्मक हुन्छ। जति सक्दो कसैले पाठको ठूलो टुक्रा देख्दछ, प्रयोगकर्ताहरू प्रायः पढ्न सुरू गरेको जस्तो महसुस गर्दैनन्।
उपशीर्षकहरू प्रयोग गर्नुहोस् जस्तै H2, H3, H4
माथि उल्लेख गरिए अनुसार, सेतो खाली ठाउँ र पाठको ब्लकहरू हेर्नको लागि यो दृश्यात्मक रूपमा राम्रो हुन्छ। हेडरहरूले लामो अंशहरूलाई सानो खण्डहरूमा भाँच्न मद्दत गर्दछ। यसले पाठकलाई आफैंलाई द्रुत झुकाव गर्न र पाठ बुझ्नको लागि एकैचोटि सबै चीज एकै चोटि पढ्न अनुमति दिन्छ।
बुलेट पोइन्ट र क्रमांकित सूची प्रयोग गर्नुहोस्
सेतो खाली ठाउँ र हेडरको प्रयोग जस्तै बुलेट पोइन्टहरू र संख्याहरूको सूचीले मद्दत गर्दछ। यी प्राय: महत्त्वपूर्ण बुँदाहरूको सार हुन्। यसले तपाईलाई सम्पूर्ण जानकारी पढ्न बिना नै धेरै जानकारीमा छिटो पार गर्न अनुमति दिँदछ।
बोल्ड शब्दहरू प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाईंले अनुच्छेद र हेडरहरू छुट्याउनुभएको छ भने पनि तपाईं पाठको केही अंशहरूको लागि अझै ध्यान (र त्यसकारण अधिक एकाग्रता) माग गर्न सक्नुहुन्छ।
सामग्रीको तालिका प्रयोग गर्नुहोस्
यदि तपाईंसँग यस लामो जस्तो पाठ छ भने, तपाईं पृष्ठको शीर्षमा सामग्रीहरूको टेबल प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यसले आगन्तुकलाई पाठको सामग्रीमा केहि समयको लागि ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत गर्दछ। राम्रो र राम्रो पाठ पनि प्रयोग गर्नुहोस्।
हाइपरलिंकहरू र बटनहरूको माध्यमबाट आन्तरिक लिंकहरूको प्रयोग गर्नुहोस्
गुगलले खोज इन्जिनबाट कति जना पृष्ठहरू भ्रमण गर्दछन् भनेर ठ्याक्कै देख्न सक्दैन, तर यसले सूचना दिन सक्दछ कि आगन्तुक खोजी ईन्जिनमा फर्किन्छ कि हुँदैन। म आन्तरिक लि of्कहरूको प्रयोग सिफारिस गर्दछु जसले आगंतुकहरूलाई वेबसाइटको अन्य भागहरूमा लैजान्छ र यसैले खोजी परिणामहरूमा फर्कने मौकालाई कम गर्दछ।
एक पपअप प्रयोग गर्नुहोस् जहाँ आगन्तुकले कार्य गर्न सक्छन्
एक पपअप सँधै ध्यान दिएर हुन्छ। तपाईं पपअप ईमेल ठेगाना छोड्न प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ, तर आगन्तुकलाई अर्को पृष्ठमा जान दिनुहोस्। यसले कम्तिमा एनालिटिक्समा बाउन्स प्रतिशत कम गर्न सक्छ।
भर्खरका मितिहरू प्रयोग गर्नुहोस्
धेरै ब्लगहरूले अन्तिम परिवर्तनको मिति देखाउँछन्। यो लामो भयो, चाँडै पाहुनाले छोड्छन्। ध्यान दिनुहोस् जब तपाई खोजी गर्नुहुन्छ। तपाईं आफैंले years बर्ष पहिले ब्लग छोड्न सक्नुहुनेछ जुन मिति पछिल्लो हप्ताको भन्दा ब्लग भन्दा छिटो छ!
तपाईंको वेबसाइटको गति बढाउनुहोस्
द्रुत वेबसाईटहरूको कम बाउन्स रेट छ। तपाईं आउनु भएको पृष्ठ तुरून्त देख्नुहुनेछ। लामो तपाईंले पृष्ठको लागि कुर्नु पर्छ, चाँडै तपाईं फर्कनुहुनेछ। यो सेलफोनको लागि विशेष गरी महत्त्वपूर्ण छ।
वेबशपमा समीक्षा हुनु महत्त्वपूर्ण छ। केवल मानिसहरूलाई उत्पादन किन्नको लागि मात्र होइन, तर उनीहरूलाई लामो साइटमा राख्नको लागि मनाउन।
अपसेल्स/क्रस बिक्रि प्रयोग गर्नुहोस्
वेबशपहरूले तुलनात्मक उत्पादनहरू प्रदर्शन गरेर लामो साइटमा प्रयोगकर्ताहरूलाई राख्न सक्दछन्। यी क्रस बेच्ने, अपसेल वा केवल तुलनात्मक उत्पादनहरू हुन सक्छन्।
तपाईंको नेभिगेसन अनुकूलन गर्नुहोस्
स्पष्ट नेभिगेशन भएकोले आगन्तुकलाई अन्य पृष्ठहरूमा फर्कन मद्दत गर्दछ। उदाहरणका लागि, ब्रेडक्रम्ब्सको प्रयोग, पक्षमा टाँसिएको नेभिगेसन र अधिक विचार गर्नुहोस्।
हामी यस लेखको अन्त्यमा छौं, र आशा छ कि तपाईं कुनलाई आफ्नो साइटको गति र कम बाउन्स दर सुधार गर्न आवश्यक छ भनेर पत्ता लगाउन सक्षम हुनुभयो।
बुझ्नुहोस् कि तपाईं गुगलमा यी फरक SEO सुझावहरूको साथ उच्चमा जान सक्नुहुन्छ। यसले कहिलेकाँही लामो समय लिन सक्दछ - तथापि, हामी प्रक्रियालाई छिटो बनाउन मद्दत गर्न सक्छौं। त्यसैले सम्पर्क गर्न नहिचकिचाउनुहोस् Semalt थप विवरणहरूको लागि।